Wax soo saarka-Aaladaha Kobcinta ee Nashqadayaasha | Hal-abuurka Online
Jose Angel | | General, Tricks
Waxaa jira waxyaabo badan oo kicin ah oo naga horjoogsanaya tillaabadayada marka ay timaado naqshadeynta, in ay adagtahay in la saaro. Ka jirrabaadda aan dhammaadka lahayn ee dib-u-dhigista ilaa hawlaha baaxadda leh Mashaariic kala duwan oo naga weeciyey. Mashquulyadani waxay hor istaagaan shaqadeena iyo feejignaanteena. Sababtaas awgeed, waxaan inta badan qabannaa hawl aan nagu filnayn. oo niyad jab nagu ridaya.
Dhammaanteen waxaan leenahay carqaladeena gaar ah, hadday tahay iimaylka joogtada ah iyo digniinaha warbaahinta bulshada ama dhiirigelin la'aan cad. Mqaar badan oo ka mid ah qalabka maaraynta ugu muhiimsan waxay ku daraan shaqooyin si loo hagaajiyo wax soo saarkayagaLaakiin ma jiro hal-cabbir-xaal ku habboon-dhan.
Mararka qaarkood waxaan u baahanahay wax u gaar ah dhibaatadeena. Akhri qalabka soo socda oo isticmaal midka aad u malaynayso inuu kuugu habboon yahay. Dhammaantood ma awoodaan mana aha inay noo adeegaan.
2 Ma jiro wax ka jeediya, Xoriyad
3 Ku xakamee hawlahaaga Goynta
4 E-mail leh Spark
5 Deegaan wax soo saar badan leh oo leh Noizio
Qalab aan shaqsiyan jeclahay. Haddii aad ka mid tahay kuwa si fudud u mashquuliya sidayda oo kale, isticmaal. Hawl-karnimada waxaad diiradda saari kartaa hawsha aad runtii u baahan tahay, iyada oo aan wax badan. Ku rakib kordhinta browserkaaga oo fur tab cusub Diiwaangeli isticmaalahaaga cusub oo guji baarka si aad u qorto hawsha aad sugayso. Way fududahay sidaad wax u akhrido Marka aad furto tab cusub waxaad had iyo jeer xasuusan doontaa hawsha aad sugayso. Markaa, dareenkaaga ugu horreeya ma noqon doono inaad furto tab taariikhda, waxaad furaysaa midda aad shaashadda ku haysato.
Asal ahaan, firfircoonidu waxay ku salaysan tahay "caado.", oo waxaad dejin kartaa xasuusin, yoolal, iyo jadwalyo, iyo sidoo kale calaamado muujinaya inta caado ee aad uga tagtay inaad dhammaystirto maalintaas. Mar kasta oo aad dhammaystirto caado la'aan, 'silsiladda' way sii dheeraanaysaa, firfircooni ciyaar dheeraad ah si ay kuu dhiirigeliso.
Ma jiro wax ka jeediya, Xoriyad
Sida Momentum, Xoriyaddu waxay kaa dhigaysaa mid wax soo saar badan iyadoo meesha ka saaraysa waxyaabaha mashquuliya. Xaaladdan oo kale, Xoriyaddu waa qalab aad u daran. Asal ahaan, waxay xannibaysaa bogagga iyo apps-ka kaa horjoogsanaya inaad noqoto mid wax soo saar leh.
Waxa kale oo ay u shaqeysaa dhammaan qaabab kasta, mobile (iOS ama Android) iyo computer (PC ama Mac). Markaa waxay kaa ilaalinaysaa inaad 'dhakhso' ah u eegto Instagram-ka mobilkaaga.
Ku xakamee hawlahaaga Goynta
Iyadoo qaar badan oo ka mid ah qalabka kor ku xusan ay yihiin kuwo loogu talagalay maaraynta ama xannibista waxyaabaha aad ogtahay inay mashquulinayaan, waxaa laga yaabaa inaadan mar walba ogaan waxay yihiin, ama waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad qirato inta wakhti ee aad ku lumiso waxyaabaha qaarkood.
Xaaladdaas, waxaad u baahan tahay kordhin browser sida Harvest. Raadiyaha fudud ee waqtiga, wuxuu ku siinayaa warbixin daacad ah oo aan xaddidnayn ku saabsan sida saxda ah waxa wakhtigaaga internetka ku qaadanaya, si aad wax uga qabato.
Beddelka la midka ah waxaa ka mid ah RescueTime , kaas oo gadaal ka socda oo lafaguro boqolkiiba wakhtiga aad ku bixiso mareegaha iyo hawlaha qaarkood, oo bixiya 'dhibcaha wax soo saarka' maalin kasta oo ku salaysan hawlahaaga.
E-mail leh Spark
Iimeylku waa ka jeedinta ugu weynmaadaama ay inta badan ku xiran yihiin shaqada si aysan u dareemin dib-u-dhigid, laakiin mar walba ma aha kuwo degdeg ah, xitaa haddii ay dareemaan inay jecel yihiin wakhtigaas.
Kuwo badan ayaa iska diiwaan galiyay aragtida ah in iimaylada ay tahay in la xaqiijiyo oo kaliya lagana jawaabo waqtiyo gaar ah oo maalinta ah, oo ku siinaya inta badan wakhtigaaga inaad diirada saarto mashaariicda. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u baahan tahay inaad isdiiwaangeliso, qalab sida Spark ayaa ku caawin kara.
Spark wuu fahmay iimayladaada kuwa ugu muhiimsan oo u dhaqaajiya liiska ugu sarreeya. Astaanteeda Sanduuqa-gelinta Smart waxay wax walba u kala saartaa Shakhsi ahaan, Ogeysiisyo iyo Wargeysyo, oo waxa ay ku baraarujinaysaa marka ay wax jiraan. Shaqada raadinta dareenka leh waxay sidoo kale badbaadisaa waqti.
Deegaan wax soo saar badan leh oo leh Noizio
Saamaynta dhawaaqa ku leeyahay heerarkeena foojignaan iyo wax soo saar ayaa noqon kara mid aad u weyn. Dhawaaqyada qaarkood si aan muran lahayn ayay u dhibsadaan, kuwa kalena waxay naga caawin karaan inaan diirada saarno. Tani waa aasaaska ka dambeeya Noizio, kaas oo isku magacaabay "saaxiibkiisa khiyaanada leh." Noizio waxay si fudud u bixisaa dhawaaqyo asal ah oo kala duwan si ay gacan uga geysato kordhinta wax soo saarkaaga oo ay joojiso dhawaqyada kale ee dhibka badan ee hadda ku waalinaya oo hoos u dhigaya nidaamkaaga. Codadka la heli karo waxaa ka mid ah qaxwo nasasho leh ama codka hirarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Qalabka wax soo saarka ee naqshadeeyayaasha
Bixin qaas ah: ku keydi 60% xirmadan weyn ee mawduucyada loogu talagalay Wordpress ee ka socda Visualmodo
Ku keydi ilaa $ 1333 dalabkan gaarka ah oo ah 250 sheybaar iyo jees jees kaararka ganacsiga, xaashiyaha iyo wixii intaa ka badan